जनगणना अधिकारीका तालिम सुरु – Saurahaonline.com
जनगणना अधिकारीका तालिम सुरु
काठमाडौँ : अबको ९७ दिनमा सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि सातै प्रदेश, जिल्ला जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारीलाई तालिम दिन थालिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सुरु गरेको साताव्यापी जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारी तालिममा सम्बोधन गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबारदेखि आयोजना गरेको साताव्यापी तालिम लिन देशभरिका करिब दुई सय अधिकृतहरू राजधानी आइपुगेका छन् । तालिममा देशभरिका ७० लाख घरपरिवारमा बसोबास गर्ने ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको यकिन तथ्यांक संकलन कसरी संकलन गर्ने भन्ने विधि, प्रक्रिया, नियमबारे बृहत् चर्चा हुनेछ । ‘विगतमा चौतारीमा बसेर तथ्यांक लिने चलन थियो,’ तालिम उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले भने, ‘अहिले भौतिक पूर्वाधार छ । सुगमता छ । स्थानीय सरकार, वडा सरकार छ । यी सबैलाई साथ लिएर राष्ट्रसेवककै हैसियतले यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी छ ।’
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक केही पछाडि परेको समेत कँडेलले उल्लेख गरे । त्यसयता राजनीतिक द्वन्द्वले जनगणना कार्यमा समेत बाधा पुगेको तर अब त्यस्तो नहुने बताए । ‘सबै गणनाहरूको मूल केन्द्र भनेकै राष्ट्रिय जनगणना हो,’ तथ्यांकको आधारमा सरकार र अन्य सरोकार निकायले योजना निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि स्थानीय तहको पर्याप्त तथ्यांक छैन । तथ्यांकको अभावले आवधिक योजना बन्न सकेका छैनन् । संघीय बजेटका करिब ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा रहेको छ ।’ आयोगले १६औं आवधिक योजना निर्माण तयारीमा जुटेको तर तथ्यांकको अभाव खड्किएको जनाए । संविधानअनुसार समानुपातिक, समावेशी संरचना, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत कार्यमा यकिन तथ्यांक आवश्यक छ । जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवस्था किटान हुने उपाध्यक्ष कँडेलले बताए ।
विभागको कार्यतालिकाअनुसार चैत १ गतेबाट प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ । तालिममा सहभागी अधिकृतलाई जनगणना अधिकारी तथा सहायक जनगणना अधिकारीको जिम्मेवारीसहित खटाइने छन् । ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित आउँदो जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेसम्म १५ दिनमा देशभरि एक साथ जनगणना हुनेछ । जनगणना कार्यमा प्रत्येक घरका घरमुलीले परिवार संख्या, लैंगिक, जातजाति, मातृभाषा, पुर्खाको भाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति जस्ता विवरण लिइने छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार छ महिनाभन्दा बढी समय जहाँ बस्छ त्यहींबाट उसको लगत लिइनेछ भने विदेशमा रहेकाको विवरण छुट्टै खुलाइने छ । त्यसैगरी घरको किसिम, स्वामित्व, शौचालय, खाना पकाउने इन्धन, बिजुली, टेलिफोन, मोबाइल, टेलिभिन, जग्गाजमीन, घरेलु उद्योग, व्यवसाय सबै खुलाइने छ । जनगणनामा ‘घर तथा घरपरिवार सूचिकरण प्रश्नावली’, ‘सामुदायिक प्रश्नावली’ र प्रत्येक घरपरिवारमा पुगेर ‘मुख्य प्रश्नावली’ सोधिने छन् । प्रश्नावली भर्दा अक्षर जति सबै नेपालीमा र अंक जति सबै अंग्रेजीमा लेख्नेछन् ।
‘राष्ट्रिय जनगणना कार्य कुम्भ मेला हो, यतिखेर सबैलाई सहभागी गराउन सकेनौं भने दस वर्ष कुर्नु पर्छ,’ जनगणना कार्य चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘हामी बिरामी पर्दा सेवन गर्ने औषधि खराब भयो भने असर गम्भीर हुन्छ । त्यस्तै हो हामीले जनगणनामा सही तथ्यांक दिन नसकेमा राज्यको नीति निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पर्नेछ ।’
जनगणना कार्यमा सबैको सहमति, सहकार्य गर्न गराउन पहल गर्नेसमेत बताए । ‘जनगणनामा मुलुकभित्र बसोबास गर्ने धनी या सडकमा गुजारा गरिरहेका विपन्न सबै नागरिकको सहभागिता रहन्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सुन्नु र बुझ्नु फरक कुरा हो । जनगणनामा खटिने अधिकृत, कर्मचारी, सुपरीवेक्षक, गणकले सर्वसाधारणलाई जनगणनाको महत्व र प्रश्नावली बुझाएर वास्तविक तथ्यांक भर्न जरुरी छ ।’ अनुभव, इमानदारिता, मन, वचन, कर्मलाई एकीकृत गरेर काम गरेर जनगणना कार्य सफल हुने श्रेष्ठले बताए ।
जनगणनामा देशभरि ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक खटाइने छन् । त्यसनिम्ति विभागले करार सेवामा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा जनशक्तिलाई अनलाइनबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ । विभागले नेपाली भाषाको अतिरिक्त स्थानीय भाषा बोल्न, बुझ्न र अरुलाई बुझाउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चैत ११ गतेसम्म दरखास्तको म्याद रहेको छ ।
विभागले जनगणनाका निम्ति आवश्यक प्रश्नावली तथा उत्तरपुस्तिका, जनचेतनामूलक सामग्री, कर्मचारी, गणक र सुपरीवेक्षकका निम्ति झोला, टोली, टर्च लाइटजस्ता सबैखाले सामग्री छपाई गरिसकेको छ । साथै, महानगरपालिका क्षेत्रका ट्याबलोडबाट जनगणना लिनका निम्ति आवश्यक उपकरण तैनाथ राखेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २५ जातजाति, १ सय २३ भाषा र १० धर्म मान्ने नागरिक रहेका छन् ।